ukuhlinzwa Plastic - lena umsebenzi kuyingozi kakhulu, abesifazane abaningi futhi amadoda banyakamisa ubuso babo, akabuyanga kudokotela noma ukwenza imisebenzi eminingi kakhulu. Isithombe kulesi sihloko uzokwazi ukubona yini ubuso bakho, uma ungeke kube ukuhlakanipha ukuya le nkinga.
Leli cala akubukeki njengoba kepha wesabeka njengezimpi kuba zonke izibonelo ezilandelayo, kodwa uma uqhathanisa ngaphambi nangemva izithombe, uzophawula umehluko omkhulu. Nikki Koks nakanjani bekhethe udokotela okungalungile, njengoba imukile supermodel kuya dummy eziphilayo. Yingakho Botox imijovo - lena yindlela eyingozi kakhulu, lapho kuphakathi kokuthi konke kuhambe kahle, umphumela ofanayo is eyatholakala.
Deril Hanna wayengomunye walaba besifazane nenhle kakhulu Eighties. Kodwa njengoba abantu ubudala, imizimba yabo kugucula, kodwa ungadikibali neyodwa isignali kusengaphambili. Futhi abanye abesifazane bathatha izinyathelo ezinqala. Endabeni uDaryl izinto azihambanga njengoba kwakuhleliwe, futhi ngenxa yalokho, waqala ukubheka ngisho nangaphezulu.
unkosikazi Jian Feng sika bafaka icala ngenxa izingane ezimbi
Indoda China awunika umkakhe enkantolo (futhi ngeke kunjalo), ebona ukuthi akhe ntwana are izici samanje esesabisayo ebusweni ababe eyinqaba kumkakhe - futhi akazi kuze kube muva nje. ukuhlinzwa Plastic Ungashintsha ukubukeka kwakho, kodwa akashintshi DNA yakho.
Uma sibukisise lesi sithombe, uzobona ukuthi lo wesifazane ebusweni samanje imiphetho anolaka ukuthi kufanele kube bushelelezi. Loku kubangelwa kumiswa isibanda izicubu phezu suspenders. Nokho, ngisho noma udokotela wakho akunikeze sona eziningi besokunxele, kodwa qualitatively futhi ngempumelelo, Akufanelanga kutsi kubukeke ngatsi. Ngaphezu kwalokho, ukunakekelwa post-op futhi ifeza indima ebaluleke kakhulu, ngakho plastic yakho akugcini etafuleni yokusebenza.
Owesifazane - unina umlingisi odumile Sylvester stallone. Jacqueline eneminyaka engu-93 uyazisola kakhulu ukuthi wanquma ukwenza ukuhlinzwa kangaka plastic - uyavuma ukuthi ayekwenza eziningi imijovo "Juvederm," analog Botox, isetshenziswa ngokuyinhloko for izihlathi. Futhi manje uthi kubukeka sengathi a kwamazinyo Chipmunk ku nati emlonyeni wakhe.
Lona wesifazane kuyinto izindebe nakanjani ulele kakhulu. Ngokuvamile, kukhona umkhiqizo ekhethekile esetshenziswa ukuze wandise ivolumu sezindebe, futhi kuphela side effect okwesikhashana - a kancane Ukushoshozela ukuzwa. Ungasebenzisa futhi lipstick eminye kancane kuka emgqeni lip ukubenza kubonakale elikhudlwana. Kodwa ukumpompa nabo ezintweni ezahlukene is hhayi Kunconywa, kungenjalo umphumela uyoba kuyafana isithombe.
Okwamanje, uChristine ungumnikazi amarekhodi Guinness Book of Records ngokuba umlomo enkulu. Wenzé engaphezu kwekhulu imijovo, ngenxa yalokho izindebe zakhe sengathi babenikelwe kwabacasula ngu iqulo lezinyosi esidumbini. Kodwa ngesikhathi esifanayo, ngokungafani kuya abantu abaningi abaye bazenza i ukuhlinzwa kokulungisa ukubukeka akuphumelelanga, Christina has abazisoli ngalesi sigameko - ngokusobala, ukuhlinzwa kwakhe kwaba yimpumelelo, futhi yilokho impela uhlobo yena inesifiso.
Omunye ukwesaba enkulu ngaphambi ukuhlinzwa plastic - ukwesatshwa akubukeki njenge ndoda. Ngempela, ngemva amapulasitiki wena 5 amaphesenti yekani ukuba indoda, futhi ngaso sonke isikhathi uma uya ngaphansi ummese kuwe kukhona plastic xaxa futhi ube ngaphansi komuntu. Udokotela ezinhle uzokutshela kahle ukuthi kudingeka silungise, futhi okubaluleke - uma sekufanele uzibambe. Kodwa kunodokotela abaningi kakhulu ezimbi, ngubani baye bacabange kuphela ngezithombe imali.
Ungabuka omunye umphumela kuhlulekile ukuhlinzwa plastic, wena kusobala ukuthi ufuna ukuthola, uma unquma ukuya ohlinzayo plastic. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuthola udokotela omuhle okunokwethenjelwa ongeyena emva imali yakho futhi ngeke azame ukushoshozela ukuba imisebenzi emisha. Akufanele sizame ukuthola isaphulelo, ngenxa yalokho, ungase bagcina okuthile kakhulu ezimbi esingaphezu isikhwama ezingenalutho.
Iningi ukuhlinzwa kokulungisa ukubukeka ngomphumela esabekayo uwela phezu izindebe. Pit Berns, umsunguli futhi umculi oholayo Dead noma Alive, waba isisulu yakamuva amapulasitiki ezinjalo. Kulokhu, Pete yena uyajabula ngokuthi ubona esibukweni - Wathi wayazi ukuthi ubuso bakhe abakwazanga ngokoqobo iwe waba yizicucu, kodwa ngeke uvimbele ukuquleka ngaphambi kokuba imisebenzi emisha.
Botox imijovo ezindebeni zakhe ezibhekwa ukuthengiselana ukuthi kungenziwa ngesikhathi nekhefu lasemini, njengoba bengakwazi kuthathe ngaphezu kwesigamu sehora. Eqinisweni, Botox - ubuthi ukuthi endlale imibimbi, kodwa paralyzes imisipha ubuso bakho. Michaela Romanino kwamenza eziningi Botox umjovo baye basakaza morschny yayo, kodwa-ke masinyane bangena sunbathe elangeni, okwenza imibimbi nakakhulu. Wavuma ukuthi ukuthembela epulasitikini futhi ngenxa omunye socialite ebukekayo kakhulu eYurophu uye yaphenduka okuthile kungasabonakali.
Kukhona esinye sezibonelo ngaphezulu izinga catastrophically abampofu ngokwawo mayelana nomsebenzi owenziwayo ezindebeni kothile. Izindebe ngokuvamile ikakhulukazi eshaya, kodwa uma izindebe hlala kwesigamu ubuso bakhe, khona-ke kukhona okungahambi kahle akunjalo.
Uma Donatella Versace kwaba owesifazane omuhle. Nokho, manje uyisibonelo esihle lwezinyawo lokho komsebenzi noma yini ukuqeda kabi ngawe. Futhi, ngenxa yesibalo esikhulu ukuhlinza plastic kanye ukushuka ngokweqile kanye lady enhle ifana izithelo omiswe. Kodwa ngenkathi Donatella yena ecabanga ukuthi kubukeka kahle, zinakekele, isikhumba sakho futhi izinwele.
Ukuhlinzwa Plastic unezigaba eziningi, ngayinye okungaba kokubili elisabisayo ezibuhlungu. Amanda Lepore watshela buhlungu kanjani babe kokuhlinzwa kwakhe, kodwa ukubonakala yayo yasekuqaleni ngeke kusasiza ngalutho ingabe konke lakwentile - kuhlanganise aphule lwezimbambo zakhe, ukuze babukeke bebancane nakakhulu.
Hang Myoko yake kwaba isibonelo esihle-Korean. Nokho, iminyaka iye yathinta, ngakho waqala ukwenza abicah imijovo, okuye bethembela. Lapho odokotela bakhe benqaba ukuwayeka imijovo wakhe phambili, waqala ukuzithengela abicah futhi amafutha akhethekile ngomgunyathi, nazo ngokujova ke ngaphansi kwesikhumba ngokwayo, okubangela ubuso bakhe bheka nje esesabisayo. Imizamo silungise zonke wanika kancane - umonakalo olwehlela yena Han, ukubuyisela akunakwenzeka.
Ihlangano yokuNgeza Plastic Surgery phezu Boulevard anemibala. ukuhlinzwa Plastic eRussia: Izibuyekezo
Yevgeny Gerasimov - Biography, ukuphila siqu, izithombe
Petersburg: isimo Cathedral njengoba kukhombisa nomlando wayo
Abantu abanjani abahluleli? Bangakufanelekeli abawinile uMklomelo KaNobel
Meaning of igama Melania. kwaqala